Hevitra famolavolana amin'ny Power Point | Creatives Online
Raha manana famandrihana Office 365 ianao dia azo inoana fa nahita serivisy vaovao ianao rehefa mampiditra sary amin'ny slide (raha mbola mifandray amin'ny Internet ianao). Momba ny hevitra famolavolana ao amin'ny Power Point, fitaovana tsy dia fantatra loatra. Mety hahaliana be anefa izany.
Raha te-hahafantatra ianao hoe inona avy ireo hevitra famolavolana ao amin'ny Power Point, ny fomba fampandehanana azy ireo ary ny azonao atao amin'izy ireo, dia hambaranay aminao ny zava-drehetra.
1 Inona no hevitra famolavolana ao amin'ny Power Point
2 Nahoana no Mampiasa Hevitra Famolavolana ao amin'ny Power Point
3 Ahoana ny fomba fampahavitrihana hevitra famolavolana
3.1 Dingana hamerenana ny hevitra famolavolana
3.1.1 Sokafy ny programa PowerPoint
3.1.2 Sokafy famelabelarana banga
3.1.3 Ny safidy "Design"
4 Atsaharo ny hevitra famolavolana
5 Safidy ho an'ny mpamorona hevitra
Inona no hevitra famolavolana ao amin'ny Power Point
Design hevitra, fantatra ihany koa amin'ny hoe Design Ideas, na PowerPoint Designer, dia tena manampy tokoa nomen'ny fandaharana mba hahatonga ny slide ho mahasarika araka izay azo atao.
Mba hanaovana izany, rehefa mampakatra ny lahatsoratra, sary, sns. eo amin'ny slide, ary manetsika ilay fitaovana ianao, dia afaka manome anao safidy maromaro handaminana indray ny atiny sy hahatonga an'io fitambarana io ho tsara kokoa amin'ny maso, manintona kokoa mba hisy fiantraikany.
Maro no mihevitra fa amin’ny maha fitaovana azy dia mety mifanandrify amin’ny olona roa na maromaro ny endrika, saingy lazaina fa tsy hitranga izany, satria kisendrasendra ny soso-kevitra aroso ary zara raha mifanojo. Ary nahoana izany no atao?
Alaivo sary an-tsaina ny slide PowerPoint. Amin'ny ankapobeny, mampiasa iray amin'ireo môdely ianao. Saingy, toa anao, maro kokoa ny olona manao izany, ary amin'ny farany dia very ny fahaiza-mamorona sy ny maha-izy azy, satria, raha ny amin'ny fampisehoana azy, dia mitovy amin'ny ankamaroan'izy ireo. Amin'ity tranga ity, ny hevitra famolavolana ao amin'ny Power Point dia mikatsaka ny hanavao sy hahatratra vokatra hafa tanteraka.
Nahoana no Mampiasa Hevitra Famolavolana ao amin'ny Power Point
Raha mbola tsy mazava aminao ny fampiasana an'io fitaovana io, ny iray amin'ireo antony manan-danja indrindra dia ny fahaiza-mamorona anananao, izany hoe ny mety hanana endrika tsy manam-paharoa. Ary koa, tsy mila mieritreritra momba ireo endrika ireo ianao, na misafidy môdely iray hametrahana ny angon-drakitra. Ny hany tsy maintsy ataonao dia ny manome azy izay tianao horaisin'ny slide ary izy no hanolotra ny hevitra hisafidiananao izay tianao. Ary na dia te hanova zavatra hafa aza ianao any aoriana, dia azonao atao.
Raha fintinina, dia miresaka momba ny fitaovana famolavolana izay manampy anao hampiseho fampahalalana amin'ny fomba samihafa ary mamela anao tsy hanahy momba ny fisafidianana ny fisehon'ny, môdely, mamorona azy, sns. Ny programa dia mikarakara izany rehetra izany.
Ahoana ny fomba fampahavitrihana hevitra famolavolana
Raha manana PowerPoint ianao ary te hampavitrika ny hevitra famolavolana ao amin'ny fandaharana, voalohany indrindra tokony ho fantatrao raha mahafeno ny fepetra takiana amin'izany ianao. Indrindra indrindra, ireto dia:
Manana ny programa Office 365 ara-dalàna, izany hoe tsy voajirika.
Manàna famandrihana amin'ny programa. Azo ampiasaina tsy misy famandrihana, fa amin'izany dia mila OneDrive na SharePoint (kaonty mavitrika sy an-tserasera).
Dingana hamerenana ny hevitra famolavolana
Raha manaraka ireo voalaza etsy ambony ireo ianao dia tokony tsy hanana olana amin'ny fampahavitrihana ny hevitra famolavolana. Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy manao izao manaraka izao ianao:
Sokafy ny programa PowerPoint
Lojika izany ary ny zavatra voalohany tokony hataonao. Mandehana any amin'ny solosainao, tadiavo ny programa ary sokafy.
Sokafy famelabelarana banga
Ny zavatra manaraka, rehefa efa manana ny programa mandeha ianao, dia ny mamely ny Presentation blank, mba hiasa "avy amin'ny scratch."
Ny safidy "Design"
Amin'izao fotoana izao dia manana ny slide banga eo amin'ny efijery ianao izay ahafahanao manampy lohateny sy dikanteny (mivoaka toy izany amin'ny alàlan'ny default). Eny, alohan'ny hanaovana na inona na inona dia tsy maintsy mandeha any amin'ny menio Design ianao. Aza matahotra raha vao voalohany ianao no mampiasa azy, dia mangataka alalana hahazo hevitra ianao, tsindrio Activate, dia ho vonona.
Hahatanteraka izany Misy tsanganana misokatra eo ankavanana izay hametraka Hevitra Famolavolana. Ary eo ianao dia afaka misafidy ny môdely na hevitra izay tianao indrindra.
Ahoana raha mila zavatra hafa aho?
Mety tsy tianao ny slide misy lahatsoratra sy soratra fotsiny, fa misy sary, misy lahatsoratra, sns. Toy izany koa. Azonao atao ny manampy an'io fampahalalana io tsy misy olana, ary miverena any amin'ny hevitra famolavolana mba hampisehoana anao safidy samihafa hanangonana ny môdely anao.
Atsaharo ny hevitra famolavolana
Mety ho tsy tianao koa ny hevitra famolavolana, na aleonao manao irery ny zava-drehetra. Raha te hisakana azy tsy hivoaka tsy an-kijanona ianao, dia tsara kokoa ny manakana azy ireo.
Mba hanaovana izany, dia tsy maintsy mandeha any Ny menio fisie ary eo dia tadiavo ny «Options».
Ao anatin'io menio io, tadiavo ilay milaza hoe "PowerPoint Options." Tsy maintsy manindry ny "General" ianao ary, saika amin'ny farany, dia hanana boaty mavitrika ianao izay milaza hoe "Asehoy ahy ho azy ny hevitra famolavolana." Tsy maintsy mamono an'io boaty io fotsiny ianao dia tsy hanana azy intsony.
Safidy ho an'ny mpamorona hevitra
Ny zava-misy fa ny hevitra famolavolana dia mavitrika ho an'ny mpanjifan'ny programa ihany no mahatonga ny maro tsy te hampiasa izany, na tsy afaka manao izany, ary midika izany fa tsy manana safidy izy ireo. Na izany aza, tsy misy zavatra tena mitranga satria azonao atao tohizo ny fampiasana ny maodely PowerPoint mahazatra izay ananantsika amin'ny alàlan'ny default.
Na mety ho izy ireo koa mikaroka amin'ny Internet mba hahazoana lasitra PowerPoint maimaim-poana, fa misy ary indraindray dia tsara tarehy tahaka ireo omen'ity fitaovana ity ho antsika.
Marina fa eto ianao dia mampidi-doza fa ny hafa dia mampiasa môdely mitovy, fa raha mikaroka tsara ianao dia mety hahita safidy tsy dia ampiasaina ary hahatonga anao hamorona endrika samihafa. Na izy ireo aza dia azo ampiasaina ho fototry ny fanovana azy ireo (raha avelany izany) ary hahazo ny môdely anao manokana.
I mean, raha manana ny famandrihana ianao dia afaka mampiasa hevitra famolavolana ao amin'ny Power Point mba hamoronana ny slide-nao tsy mandany fotoana ary misafidy endrika mamorona sy manintona. Fa raha tsy manana ianao dia tsy misy zavatra mitranga koa; Marina fa tsy maintsy manokan-tena bebe kokoa ianao mba hahitana ny môdely mety na ny endrika tonga lafatra, saingy ny vokatra dia mety ho mahatalanjona. Lazao anay izao, efa nanandrana ilay fitaovana ve ianao? Ahoana ny amin'izany? Mendrika ny famandrihana ve ny ahafahana manetsika azy?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Cheats » Mamolavola hevitra ao amin'ny Power Point
Inona no atao hoe risography?